Ike Barinholtz – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Hunt (2020) Unicode လူကုံထံလူတစ်စုရဲ့ Group Chat တစ်ခုတွင် အိမ်တော်ကြီးမှာအမဲလိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီ အပြန်အလှန်ပြောဆိုပြီးမကြာခင်မှာ …. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မသိကြတဲ့ နေရာစုံက လူ ၁၁ ယောက်ဟာ ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှန်းမသိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာနိုးလာကြတယ်။ သူတို့ကိုဘာလို့ရွေးချယ်ထားတာလဲ ဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ ဘယ်သူမှသေချာမသိကြပါဘူး။ လက်နက်သေတ္တာကြီးထဲမှာ လက်နက်တွေကိုစယူလိုက်တာနဲ့ အမဲလိုက်ပွဲကစတင်ပြီး တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံကြရတယ်။ ဒါပေမယ့် သားကောင် ကနေမုဆိုးအဖြစ်ပြန်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထွက်ပေါ် လာပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းအစစ်အမှန်ဟာ ချယ်ရီသင်းသီချင်းလေးလို “လိုက်လို့ပြေးတာလား ပြေးလို့လိုက်တာလား” နဲ့မုန့်လုံးစက္ကူကပ် ဖြစ်နေလို့ သေချာနားလည် အောင်လို့ဇာတ်လမ်းလေးပဲကြည့်လိုက်ကြပါတော့နော်။ ဇာတ်လမ်းစစချင်းမှာပဲ သွေးသံတရဲရဲနဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာတွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်သေတိုင်း ဟာခနဲ ဟင်ခနဲ ဖြစ်ရမယ့် IMDb 6.4 ရထားတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။ Credit Review Zawgyi လူကုံထံလူတစ္စုရဲ႕ Group Chat တစ္ခုတြင္ အိမ္ေတာ္ႀကီးမွာအမဲလိုက္ျခင္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုၿပီးမၾကာခင္မွာ …. တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မသိၾကတဲ့ ေနရာစုံက လူ ၁၁ ေယာက္ဟာ ဘယ္ေရာက္လို႔ဘယ္ေပါက္မွန္းမသိတဲ့ေနရာတစ္ခုမွာႏိုးလာၾကတယ္။ သူတို႔ကိုဘာလို႔ေ႐ြးခ်ယ္ထားတာလဲ ဘာလို႔ဒီကိုေရာက္ေနတာလဲ ဘယ္သူမွေသခ်ာမသိၾကပါဘူး။ လက္နက္ေသတၱာႀကီးထဲမွာ လက္နက္ေတြကိုစယူလိုက္တာနဲ႔ အမဲလိုက္ပြဲကစတင္ၿပီး တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ခံၾကရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သားေကာင္ ကေနမုဆိုးအျဖစ္ျပန္ေျပာင္းသြားတဲ့အခါမွာ ဖုံးကြယ္ထားတဲ့အေၾကာင္းအရင္းေတြထြက္ေပၚ လာပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းအစစ္အမွန္ဟာ ခ်ယ္ရီသင္းသီခ်င္းေလးလို “လိုက္လို႔ေျပးတာလား ေျပးလို႔လိုက္တာလား” နဲ႔မုန႔္လုံးစကၠဴကပ္ ...
IMDB: 6.5/10 65267 votes
Suicide Squad (2016) Extended Version Superman သေ (ပျောက်ကွယ်) သွားပြီးတဲ့နောက် အမေရိကန်အစိုးရဟာ သူတို့ထက် သာနေတဲ့ အရာတစ်ခုရှိနေရင် နေမထိထိုင်မသာဖြစ်တတ်တဲ့ ထုံးစံအတိုင်း နောက်ထပ် ပေါ်လာမယ့် Superman ဟာ လူကောင်းမဟုတ်ပဲ လူဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ရင်၊ Whitehouse အမိုးကို ဆွဲလှန်ပြီး သမ္မတကို ပြန်ပေးဆွဲမယ့်သူဖြစ်နေရင် သူ့ကို ဘယ်သူကတားနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့အဖြေကို ရှာနေကြပါတယ်။ . သူတို့ရဲ့ အဖြေကိုတော့ ဆိုးပေ့ဆိုတဲ့ သဘာဝလွန် လူဆိုးတွေကို ဖမ်းထားတဲ့ blacksite အကျဉ်းထောင်တစ်ခုမှာ သွားတွေ့ပါတယ်။ အဲ့မှာ ဖမ်းမိပြီးသား ဖြစ်နေတဲ့ Deadshot, Harley Quinn, Killer Croc, Diablo, Captain Boomerang, Enchantress အစရှိတဲ့ super villain တွေကို အကျပ်ကိုင် control လုပ်ပြီး taskforce တစ်ခုဖွဲ့ထားဖို့ပါ။ Villain ကို နှိမ်နင်းဖို့အတွက် ထိန်းလို့ရမရမသေချာတဲ့ villain တစ်အုပ်ကို ...
IMDB: 6.1/10 521,087 votes
Suicide Squad (2016) Extended Version